Free movie downloader: download filimada ee goobta kasta ee click ah
> Resource > Video > Sida loo Download Movies la Free Movie Downloader
Maalmahan, in aad heli fududahay in farabadan oo filimada xiiso leh oo ku saabsan internetka. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa tan oo filimada soo bandhigeen in channel Movie on YouTube ah. Iyadoo daawashada online, waxaa laga yaabaa in aad dareento rabitaan degdeg ah si ay u dooxi ka websites in ay ku hayso jeebkaaga. Sidaas, waxaad sidoo kale ku gubi karaa filimada in disc weligiis sii ama kaliya iyaga u arkaan marka uu jiro xiriir internet lahayn. Laakiin mar walba waa madax xanuun aad nuqulka filimada off websites sida YouTube. Waxaad u baahan doontaa aalad dhinac saddexaad si ay u caawiyaan. Wondershare Free YouTube Downloader ( Free YouTube Downloader for Mac ), downloader u movie free noqon doonaa doorasho wanaagsan. Waxaa ka YouTube kala soo bixi kartaa oo dhan filimada ka. Waa maxay xusid mudan waa in ay tahay 100% xor ah.
Ha ka waaban inaad kala soo baxdo download movie software free ah oo loo soo dajiyo waa. Waxay hor ordi doonaan ciyaaro filimada aad rabto. Barnaamijka wuxuu leeyahay laba nooc. Dooro mid ka mid ah sida ay nidaamka qalliinka of your computer ah. Ahmiyada article tani waxay noqon doontaa version daaqadaha.
1 Hel helitaanka filimada si ay u soo bixi
Bilow browser si aad u galaan YouTube.com. Raadi filimada aad iyo iyaga guji inuu u ciyaaro. Hubi in aad ku qor in YouTube.com in bar cinwaanka ah daalacashada soo socda: IE, Firefox ama Chrome.
2 Download filimada aad jeceshahay
Marka filimka bilaabo ciyaaro, waxaad ka heli kartaa button Download Midigta sare ah marka dulqabo jiirka halkaas. Riix badhanka si aad u hesho filimka soo bixi.
Ama nuqul url ee filimka oo guji dhaji URL on interface dajinta barnaamijka ee. Sidaas laga door bidi haddii aadan rabin in ay sugaan filimada in ay ku shuban.
Ka dhig degsado filimada iyada oo mid ka mid ah laba siyaabood oo barnaamijka ku yeelan karaan 5-10 filimada duuban oo isku mar ah.
3 Play on kombuyuutarrada gacanta (kaliya ka dib markii updated)
Marka filimada waxaa lagala soo bixi, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad qaadato go adigoo galay aaladaha aad la qaadi karo sida iPad. Laakiin filimada ee lagala soo bixi mar walba waa in qaab flash oo waa inuu marka hore waxaa loo roggi ah. The software downloader filimka lacag la'aan ah ma laha shaqada, laakiin haddii aad u cusboonaysiiso si ay version buuxda, oo aad gebi ahaanba u bedeli karaan wax filim soo bixi ku qasabno yar. Tani waxay laba Softwares wadaagaan interface ka mid ah. Sidaas dib markii la xariirta, heli button badalo on xaq ah filimka ka. Waxaa Riix dooro qaab socon. Taasi waa, ka dibna qalabka aad qaadi karo inuu ka ciyaaro aad wareejin karaan filimka badaley.
Taasi oo dhan habka dajinta. Ha u arkaa in ay aad u fudud in ay ku shaqeeyaan aad? Oo waxaa noqon kara tababaraha filim ay soo degida files movie oo dhan maktabada bixi. Waxaa sidoo kale waa ciyaaryahan fiican movie taageeraya oo dhan qaabab caadi ah. Download barnaamijka si aad hadda bilowday.
Maalinta Jacaylka Video Cards iyo Funny V-Day Vidoes